Warshada funaanadaha Shiinaha iyo soosaarayaasha | Himilada
Kid Tee waa dhar jilicsan oo jilicsan oo lagu qaato funaanada suufka 100% ee suufka caadiga ah. Miisaankan fudud, shaati qoorta waxyar lagu rakibay waa wax fiican markaad raadinayso wax leh xoogaa tayo dheeraad ah. * Suufka 100% ee suufka ah wuxuu siinayaa shaati gacmeed jilicsan oo sifiican ugu habboon codsi daabacaad kasta oo caado ah wuxuuna leeyahay qaab casri ah oo dheeri ah kana celinaya inuu muuqdo sanduuq.
Teegeeda caadiga ah ee raaxada leh ayaa ku fiican koox kasta. Waxaa lagu heli karaa cabbirro kala duwan oo leh raaxo habboon, badeecadani waxay dabooli doontaa baahiyaha kooxdaada qiimo aad jeceshahay.
Nooca Badeecada Shaati Kid T Custom
Waxyaabaha 100% cudbi suuf ah
Nooca Dharka Jersi
Miisaanka garaam 150gsm, ama sida la codsaday
Hore: Haanta Sare
Xiga: astaan ​​caado ah oo dhogor ah oo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan oo hoodies ah oo haween ah
Bambooyin T-shaati loogu talagalay carruurta
Shaati Polo Shaati Gaaban Gaaban
T-Shirts Soft Bamboo jilicsan ee carruurta
caadadii carruurta tayada leh dharka piq cudbi lab ...
dhididka dharka guntay ee jumlada p ...